Inona no gorodona PVC sy ny fomba hisafidianana gorodona PVC? - ZD manam-pahaizana zoro
Home > Inona no gorodona PVC sy ny fomba hisafidianana gorodona PVC?
Inona ny gorodona PVC
Araka ny firafitra, ny gorodona PVC dia mizara ho telo karazana: karazana mampitambatra maro karazana, homamiadana amin'ny alàlan'ny fo ary karazana semi-homogeneous.
1. gorodona PVC fitambatra maro: Ny gorodona misy rafitra marobe maro dia ankapobeny amin'ny alàlan'ny fanamoriana ny làlan-jotra 4 ka hatramin'ny 5, ary amin'ny ankapobeny dia misy takelaka vita amin'ny akanjo (anisan'izany ny fitsaboana UV), ny fametahana horonantsary vita pirinty, ny sosona fitaratra fitaratra ary ny foza elastika. Layer, base layer, sns.
2. gorodona PVC mangarahara homamiadana: Ny akora dia homogeneous amin'ny avo sy ambany, izany hoe, manomboka eo ambony ka hatrany ambany, manomboka eo ambony ka hatrany ambany, mitovy ihany ny akanjo rehetra.
Faharoa, ny fividianana fahalalana amin'ny gorodona PVC
1, ny hatevin'ny
Ny hatevin'ny gorodona PVC no tena mamaritra ny lafiny roa, izany hoe ny hatevin'ny sosona primer sy ny hatevin'ny takelaka vita amin'ny akanjo. Amin'izao fotoana izao, ny hatezerana mahazatra kokoa amin'ny sosona primer eo amin'ny tsena dia: 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, ary ireto karazana telo ireto, ary ny hatevin'ny takelaka lamba dia: 0.12mm, 0.2mm, 0.3mm, 0.5mm, 0.7mm, sns. Raha ny fitsipika, ny matevina ny gorodona, ny lava kokoa ny fiainana fanompoana, indrindra ny hatevin'ny takelaka lamba, mazava ho azy, ny avo kokoa ny vidiny. Betsaka ny mpanjifa no diso hevitra rehefa mividy gorodona PVC, izany hoe, mijery fotsiny ny vidiny izy ireo ary tsy manontany momba ny hateviny. Ny mpanjifa dia tokony hahitana orinasa matihanina PVC matihanina hividianana: amin'ny ankapobeny, ny tokantrano dia mampiasa gorodona vita amin'ny plastika miaraka amin'ny hateviny 2.0mm hatramin'ny 3.0mm ary lamba matevina vita amin'ny 0.2mm hatramin'ny 0.3mm.
pvc gorodona fividianana
2. Ny akora sy ny fizotran'ny famokarana
Ny gorodona PVC dia fitambaran-tsolika voalohany, takelaka horonantsary vita pirinty ary misy takelaka mitafy lamba.M kalitao ireto akora telo ireto no mamaritra ny kalitaon'ny gorodona PVC.
3. Ny dingana famokarana
Izany hoe, ny fizotran'ireo telo voalaza etsy ambony dia mizara ho karazany roa izao: ny fanerena mafana sy fanilihana.Ty avo kokoa ny vidin'ny fanerena mafana, ny kalitao dia milamina kokoa, ary ny takelaka vita amin'ny lamba dia mora voarangotra.
Mpanjifa maro no tsy miraharaha ny kalitaon'ny fananganana, raha ny marina, orinasa maro sy ekipa mpanao fananganana no tsy miraharaha an'izany, ary manao fifanarahana fotsiny. Raha ny voalaza dia, teboka telo sy teboka fito amin'ny fananganana, gorodona plastika PVC aorian'ny fahavitana ny fiantraikany amin'ny ankapobeny, ny zava-dehibe indrindra dia ny kalitaon'ny fananganana, ny fananganana fivoahan'ny tena mandritra ny fananganana dia tena zava-dehibe ihany koa, maro ny mpanjifa fanatsarana trano no nahare fa mandoa ny tenany. Tsy tian'izy ireo ny manao ambongadiny sy mampihena, ary mitaky ny hametrahana azy ireo mivantana amin'ny tany tany am-boalohany; maro koa ireo orinasa tsy manome tombon-tsoa hamonjy ny vidin'ny fananganana. Ny fananganana fikaonan-tena dia tsy maintsy atao hentitra arakaraka ny fizotran'ny fananganana, raha tsy izany dia mora foana ny tsy fahatomombanan'ny gorodona plastika PVC.
fametrahana rihana pvc
Ny ain'ny serivisy ahazoana vokatra dia tsy mifandraika amin'ny kalitaon'ny vokatra ihany, fa koa amin'ny fampiasana ny mpividy. Raha mbola ampiasaina amin'ny fampiasana ara-dalàna ny serivisin'ny serivisy PVC dia mihoatra ny 10 taona. Na izany aza, na dia tsy ampiasaina amin'ny fomba mahazatra aza izy, na dia ny gorodona tsara indrindra aza tsy afaka tezitra.
Inona no gorodona PVC sy ny fomba hisafidianana gorodona PVC? Ny atiny mifandraika